ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း (၁) မှ (၁၀) | Danya Wadi
»ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း (၁) မှ (၁၀)
အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ စာမြည်း ဖတ်ရန် နှင့် အပြည်အစုံဖတ်လိုလျှင် ၎င်း လင့် ကိုနှိပ်၍ဖတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၁၀)
By danyawadi February 23, 2013
အပိုင်း(၁) မှ (၉)ထိလင့်ကိုကလိက်လုပ်၍ဖတ်ရန် –
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင…
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင…
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၂)
(၁) ရိုဟင်ဂျာအမည်နာမကို တစ်ပါတီ၊စစ်အစိုးရကာလမှအပ ရှေးယခင်ကတည်းကသုံးစွဲခြင်း။
(၂) ရခိုင်အမျိုးသားများ၏ရိုဟင်ဂျာသုံးစွဲခြင်းကိုကန့်ကွက်ခြင်းအား ချေပခြင်း။
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသော အမည်နာမကို ရခိုင်ပြည်ရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များက လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၅၀ က တည်းက သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း သမိုင်း မှတ်တိုင်များ တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း၏ တစ်ပါတီ အာဏာရှင် စနစ်ကြောင့် မြန်မာလူထု၏ သမိုင်းကြောင်း အခွင့် အရေးမှန် သမျှ ဆုံးရှုံး ခဲ့ရ သည် ကို မစဉ်းစားဘဲ ရှေးအစိုးရ အဆက်ဆက်ကရော ရိုဟင်ဂျာ ဆို သည့် အခေါ်အဝေါ်ကိုသော် လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသား ဆိုသည့် အချက် ကိုသော်လည်းကောင်း လက်ခံ ထားခြင်း မရှိခဲ့ပါ ဘူး ဟု ပြောဆိုနေသော အကြီးအကဲ များ၊ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် များကို အောက်ပါ အတိုင်း သမိုင်း ကြောင်း အမှန်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသား များပါ ဟု အကြံပြု တောင်းဆို အပ်ပါသည်။
၁။ နယ်ချဲ့ဗြိတိသျှ အစိုးရ လက်ထက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသား အားလုံးသည် လူမျိုးစုရေး ရာ နိုင် ငံရေးမရှိ၍ လွတ်လပ်ရေး အတွက် တိုင်းရင်း သားပေါင်းစုံ ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင် ရသော အချိန် ကာလ ဖြစ်ပြီး လူမျိုး နာမည် ကိစ္စ ပေါ်ပေါက်စရာ အကြောင်းမရှိသေးပါ။
၂။ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်နှင့် ရခိုင်ဘုရင်လက်ထက်တွင် ရိုဟင်ဂျာဟူသော အမည်နာမကို
မဟာ မေဒင် များကိုသာခေါ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၃။ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုတို့က အဆိုပါ သမိုင်း နောက်ခံ များကို ကောင်းမွန်စွာ သိရှိသောကြောင့် ရခိုင်ပြည်၏ မဟာမေဒင်များကို ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနှင့် တိုင်းရင်းသား ပါဟု အောက်ပါ တိုင်းရင်းသားအခွင့် အရေးအပြည့် အ၀ကို ပေးခဲ့ဖူးကြောင်း တင်ပြလို ပါသည်။
(၁) ရိုဟင်ဂျာ အသုံးအနှုန်းကို ဘယ်နိုင်ငံရေး သမားများ၊ ရှေးအစိုးရ ခေတ်အဆက်ဆက်က အသုံး မပြုထား ပါဘူးလို့ စောဒကတက်ခြင်း အပေါ် နိုင်ငံတော်အကြီး အကဲနှင့် တချို့သော အဖွဲ့အစည်း များ အားရှင်းလင်း ချက်။
ရိုဟင်ဂျာတို့၏နောက်ခံသမိုင်း အခြေခံအားလုံးကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုတို့ သိသောကြောင့် (၁၉၄၇) ခုနှစ် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲရန် တစ်ခြား တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ နည်းတူ ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၂)ဦး ကို ဖိတ်ခေါ် ပါဝင် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ရခိုင်ပြည်ရှိ မွတ်စလင်များကို တခြား တိုင်း ရင်း သား များနည်းတူ အခွင့်အရေးအပြည့်အ၀ပေးမည်ဟုအာမခံခဲ့ဘူးသည်။ လာမည့် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်မှာ နိုင်ငံခြား သားများ မပါစေရ ဟု အောင်ဆန်းအက်တလီစာချုပ်မချုပ်မီ အရေးဆို ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းရှိ တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာများမှ ခေါင်းဆောင်များကို တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် တွင် ပါဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
(၁) ဦးဆူလ်တာန်အာမဒ်နှင့် (၂)ဦး အဒူလ်ဂဖါးတို့ ၁၉၄၇ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ရေး ဆွဲ ရေး ကော် မတီ (၃၅) ဦးမှာပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ခုဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဟူသည် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ် လပ် ရေးအတွက် အခြေခံ အုတ်မြစ်ဖြစ်ရာ၊ ဤမျှအရေးကြီးသော တိုင်းရေးပြည်ရေးကိစ်္စများတွင် တခြား တိုင်းရင်းသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးပေးရမည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင် ခံယူ ခဲ့ကြောင်း ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသားများအတွက် ဤအခွင့်အရေးသည် ဦးစားပေးအခွင့် အရေးဖြစ် ပါသည်။ အဆိုပါကိစ္စကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်မှ ၁၂ ရက်ထိ ပထမပင်လုံညီလာခံတွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ကိုယ်စား ပါဝင်ခဲ့သော ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုမှ ပြည်ထောင်စုအရေး သိသောကြောင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး များအား တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀စုံစုံလင်လင် ပေးခဲ့ဖူးကြောင်း သမိုင်း မှတ်တိုင်အဖြစ် ရှိခဲ့ပါသည်။
၎င်းအပြင် ဗမာလူမျိုးစုမဟုတ်သော တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်မှ —
– အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အတူ ပင်လုံညီလာခံကို လက်တွဲ ဆောင် ရွက် ခဲ့သူ၊
– လွတ်လပ်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဆုံးသမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသူ၊
– သမ္မတအဖြစ်မှ အနားယူပြီး လူမျိုးစုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သူ၊
– သီပေါမင်းနှင့် စုဖုရားလတ် အရှင်နှစ်ပါးကို အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့အစိုးရ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားစဉ် ဖခင် ညောင်ရွှေစော်ဘွား ဆာစ၀်မောင်က နယ်ချဲ့ကိုပြန်တိုက်ခိုက် ရန်ကြိုးစားသူ၏ သားဖြစ်သူ ပထမ ဆုံး မြန်မာ သမ္မတကြီး စ၀်ရွှေသိုက်မှ –
“ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ပင် ရိုဟင်ဂျာတို့သည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြသည်။ ရိုဟင်ဂျာင့် ရှမ်း တို့ မှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ရာ တွင်ခြားနားမှုမရှိပါ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသမ္မတကြီး စ၀်ရွှေသိုက် မှ အတိ အလင်း မီးမောင်းထိုး မှတ်တမ်းပြုစကား ကို ပြောပြခဲ့သည်။
၁၉၅၄ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၅)ရက်နေ့၊ ည ၈ နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံ တော် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု၏ အသံလွှင့် မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နုတ်ချက်
“ပြည်ထောင်စုရဲ့ အနောက်တောင်ဖက်မှာ ရခိုင်တိုင်းရှိတယ်၊ အဲ့ဒီရခိုင်တိုင်းရဲ့ စစ်တွေခရိုင်ထဲမှာ ဘူးသီးတောင် နှင့်မောင်တောဆိုတဲ့ မြို့နယ်(၂) မြို့နယ်ရှိတယ်။ အဲဒီမြို့နယ် (၂) မြို့နယ် ဟာ အရှေ့ ပါကစ္စတန်နှင့် နယ်ချင်း ဆက်စပ်နေ တယ်၊ ဒီဘူးသီးတောင် နှင့်မောင်တောမြို့နယ် အတွင်း မှာ နေ ထိုင်ကြ တဲ့ ပြည်ထောင်စုသားများဟာ များသော အားဖြင့် “ရိုဟင်ဂျာ” အမျိုးသားများဖြစ်ပြီး မွတ်စလင် များဖြစ်ကြပါ တယ်” ဟု အသံလွှင့်မိန့်ခွန်း ရှင်းလင်းချက်စာအုပ် စာမျက်နှာ (၃) တွင် ဖော် ပြထားပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော် ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်နှင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဗဆွေ၏ လူထုအစည်း အဝေး မိန့်ခွန်းကောက်နုတ်ချက်။
၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၃-၄)ရက်နေ့များတွင် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမြို့ လူထုအစည်း အဝေး ၌ အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ခွန်းမြွက်ကြားခဲ့ပါသည်။
“ရိုဟင်ဂျာ”လူမျိုးစုသည် လူနည်းစု များဖြစ်ကြသော ရှမ်း၊ချင်း၊ကချင်၊ကရင်၊ကယား၊မွန်၊ရခိုင် စသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများနှင့် တန်းတူဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှေးနှစ်ပေါင်း များစွာ က ရာဇ၀င် အ ရ နေထိုင် လာခဲ့ကြကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည် သစ္စာသမာ ဓိနှင့်ပြည့်စုံကာ တိုင်းရင်းသား အခြား လူမျိုး များ နှင့် ရင်းနှီး စွာချစ်ကြည် ကြကြောင်း ရာဇ၀င် အထောက်အထား များနှင့် မိန့်ကြားသွား ခဲ့ပါသည်။
(၁၅.၅.၆၁) နေ့မှစ၍ ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု၏ အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို တစ်ပတ်လျှင်(၃) ကြိမ် နှုန်းဖြင့် ဒုတိယမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှ ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာစကားဖြင့် အသံလွှင့်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါ သည်။ ထိုသို့ ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာ အစီအစဉ်ဖြင့် အသံလွှင့်ခဲ့သည့်ကိစ္စကို ပြန်ကြားရေးနှင့် အသံလွှင့် ဦးစီးဌာန ထုတ် နှစ် (၃၀)မြန်မာ့အသံစာအုပ် စာမျက်နှာ(၇၁)တွင် တရားဝင်ဖော်ပြ ထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
မြန်မာ့အသံ (၂၅) နှစ်မြောက် ငွေရတုသဘင် စာအုပ်အဖြစ် ၁၉၇၁ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် သောတ ရှင် မဂ္ဂဇင်းကိုထုတ်ဝေခဲ့ရာ ထိုစာအုပ်စာမျက်နှာ(၅၅)တွင် ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှစ၍ တိုင်းရင်း သား ဘာသာ စကား များဖြင့် စတင်အသံလွှင့်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရက်စွဲများကိုဖော်ပြရာ၌ ၁၉၄၇ခုနှစ်တွင် အဓိက ရှမ်းနှင့် ကချင် ဘာသာ၊ ၁၉၄၉ ခုနှစ် တွင် စကောကရင်နှင့်ပိုးကရင်ဘာသာ၊ ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် ချင်းဘာသာ၊ ၁၉၆၁ခုနှစ် တွင်မွန် ဘာသာ၊ ပအို့ဝ်ဘာသာ၊ လားဟူဘာသာ၊ ရိုဟင်ဂျာဘာသာနှင့် ကယားဘာသာ တို့ အသံလွှင့် ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
လူသားမျိုးနွယ်အချို့သည် မူလကသမိုင်းစဉ်အရ ၎င်းတို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည့် လူမျိုးအမည်မှ လည်း ကောင်း၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာလူမျိုး အမည်ကိုပြောင်းလဲမှည့်ခေါ် သတ်မှတ်လာခဲ့ကြခြင်း ကို လည်း ကောင်း အခြား လူတစ်စု၊ လူမျိုးတစ်မျိုးက ကန့်ကွက်ခွင့်ရှိ မည်မဟုတ်ချေ။ လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ့် ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန် တီးနိုင်သော (ဖန်တီးခွင့်) လူသားတို့၏ မွေးရာပါအခွင့် အရေး တစ်ရပ်ဖြစ် သည် ဟု ခံယူပါသည်။
ဥပမာ….မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်က “လ၀”လူမျိုးမှ”၀”လူမျိုး၊ “ကရင်နီ”မှ”ကယား”လူမျိုး၊ “တလိုင်း” လူမျိုး မှ “မွန်”လူမျိုးဟု လည်းကောင်း အသီးသီး ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ကြသည်။ ယခုမူ “Burma” မှ “Myanmar” ဟု ပြောင်းလဲခေါ် ပါရန် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲမှ တစ်ကမ္ဘာလုံးအား ညွှန်ကြား ရာ မြန်မာ ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြ သည် မဟုတ်ပါလား။ အမေရိကန်သမ္မတကြီး ဘာရက် အိုဘားမား ၏ မော်ကွန်း ၀င် မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် (၁၉.၁၁.၂၀၁၂)ခု မွန်းလွဲ(၂း၄၀)မိန့်ခွန်း အစချီတွင် “မင်္ဂလာပါမြန်မာနိုင်ငံ”ဟု ခေါ် ဝေါ် သုံးစွဲခဲ့သည်။ သို့အတွက် ကြောင့် ရခိုင်ပြည် ရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာကိုးကွယ်သော မွတ်စလင် လူမျိုး နွယ် စုများသည် (၁၇)ရာစုမှစ၍ ရိုဟင်ဂျာဟု မိမိလူမျိုးအမည် နာမကို ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲခဲ့သည်မှာ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းအရ ထင်ရှားနေပေသည်။ ရိုဟင်ဂျာနာမည်ကို လွတ်လပ် ရေး ရပြီးနောက်ပိုင်း မှစ၍ စတင်သုံးစွဲခဲ့ သည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ လုံးဝ(လုံးဝ)မှန်ကန်မှု မရှိကြောင်း သက် သေ ပြ၍ ရှင်းပြလိုပါသည်။
(၂)။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှတ်တမ်းအနေဖြင့် —
(1) Buchanan သည် ၁၇၉၀ ခုနှစ် A Comparative Vocabulary of some of the Language spoken in the Burma Empire တွင် The First is that spoken by the Mohammedans, who have been long settled in Arakan and who called themselves Rooingar (or) native of Arakan ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ (ထို့ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ သည် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သည်မှာ သေချာ ပြီး ရခိုင်ဒေသရှိ မဟာမေဒင် ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။)
(2) တတိယစာအုပ်မှာ ဂျာမန်ဘာသာဖြင့်ရေးထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကိုးကားသော အင်္ဂလိပ် စာအုပ်တွင် (Curchill) Collection of Voyages in travels London, 1732 f.t. VI, Page 697 spp ဟု အင်္ဂလိပ်စာအုပ်များ ရှိပေသည်။ ထိုစာအုပ်တွင် Rooinga (Rohingya) ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ဂျာမန်ဘာသာဖြင့် …. In Ost, Indien diesseitsdes Ganges in Arakan Sinddiese Zwey Sprachen Mischengen der benuchbarten, Rooinga order Ruinga von Hindi, Rukheng (S. Arakan) and Arabischen Gesprochen von dortigen Muhamedanerm ဟူ၍တွေ့ရှိရပါသည်။
(3) Classical Journal တွင်လည်း ကမ္ဘာ့အထင်ကရ ဘာသာစကားများ၊ အရှေ့တောင်အာရှရှိ ဘာသာ စကားများ၊ အိန်္ဒိယ၊ သီဟိုဠ်ရှိ ဘာသာစကားများကို လေ့လာခဲ့ဖူးသည်။ ၎င်းအပြင် ရှေး ဟောင်း ကမ္ဘာလှည့်များပြုစုထားသော မှတ်တမ်းများတွင် ၎င်းစာအုပ် စာမျက်နှာ(၁၀၇)တွင် မြန်မာ ပြည်ရှိ Rooinga, Rossawn, Banga, Burmah တို့၏ Numerals ဂဏန်း တစ်မှတစ်ဆယ် အထိ နှိုင်း ယှဉ်ဖော်ပြထားသည်။ စာမျက်နှာ(၅၃၅) Index မှာလည်း Rooinga (ယနေ့ရိုဟင်ဂျာ) Language ကိုစာမျက်နှာ(၃၄၈)သို့ကြည့်ရန်ဟု အညွှန်းပြထား သည်။ ရခိုင်ပြည်တွင် Rooinga ဟူသောလူမျိုးနှင့် အမည်နာမသည် အတည်တကျရှိသည့် လူမျိုးတစ်မျိုးရှိ နေကြောင်း ထင်ရှား ပေသည်။
ဤ အထောက်အထား သည် မြန်မာ ဘုရင်ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်နှင့် မတိုင်ခင်မှတ်တမ်း ဖြစ်ပြီး၊ ၁၄၀၆ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၀လီခန် နှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စန်ဒီခန်တို့ဖြင့် ပါလာသော နောက် လိုက် ဗိုလ်ပါ များကို နရမိတ်လှ (စူလေမန်ရှား)က ရခိုင်ပြည်နယ်၌ပင် သစ္စာရှိပြီးအေးချမ်းစွာ နေထိုင်သွားရန် စီစဉ် ပေး ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၀လီခန်နှင့် စန်ဒီခန် တို့ကြောင့် အစ္စလာမ်ယဉ်ကျေးမှု ပျံ့နှံ့လာသည်မှာ အထင်အ ရှား ဖြစ်ပါသည်။ မြောက်ဦးမြို့ ရှိ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် စန်္ဒီခန်ဗလီမှာ ထင်ရှားသော အမှတ် အသား လက္ခဏာ လည်းဖြစ်ပါသည်။ အာရကန် တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အစဉ်တစိုက် လက်ခံ ယုံကြည်ကိုး ကွယ် နေသူ အနက် မှ အချို့မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်း ကိုးကွယ် ယုံကြည် လာသူများ ရှိကြောင်း ကို လည်း (ရခိုင်အမျိုးသား) ဓည၀တီ ဆရာတော် ဦးဥာဏက ရခိုင်ရာဇ၀င် ဒုတိယ အတွဲစာ မျက်နှာ (၁၆၁/၁၆၃)တွင် မင်းဘာကြီး လက်ထက် ပါရှန် အင်ပါယာ ဖတ်တာကာဒီ ဦးဆောင် သော သံအမတ် (၃)ဦး ဘုရင့်ထံရောက်လာကြောင်း၊ အိနိ်္ဒယမှ အစ္စလာမ် တရားဟော သာသနာပြု ဆရာ များ ပါလာ ကြပြီး ရခိုင် ပြည်သူတို့အား အစ္စ လာမ် တရားတော်ကို ဟောပြော သင်ကြားပြသရာ ရခိုင် အမျိုး သား အချို့ယုံကြည်လာကြပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ကြောင်း မြို့ဟောင်း မြို့သား (ရခိုင်အမျိုး သား) ပဏ္ဍိတ ဦးသာထွန်းအောင် ရေးသားသော ရခိုင်မဟာရာဇ၀င် စာအုပ်တွင် ထင်ထင် ရှား ရှား ရေးသား ထားကြောင်း သိရှိရပါ သည်။ ရခိုင်အမျိုး သားခေါင်းဆောင်ကြီး နိုင်ငံတော် ကောင်စီ ၀င် ဟောင်း သတင်းစာဆရာ (ရခိုင်အမျိုးသား) ဦးလှထွန်းဖြူ က ရေးသားထားသော “အောင် ပန်းကြီးငွေ စကားရည်လုပွဲ”စာအုပ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချို့ အစ္စလာမ် ဘာသာသို့ ကူးပြောင်း ခဲ့ ကြောင်း ရေးသား ထားပါသည်။
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ပညာရေး မဟာဌာနကထိက ဦးကြည် ဘီအေ(ရာဇ၀င်ဂုဏ်ထူး) ဘီအီးဒီ၊ ဘီ အယ်လ် ရေး မြန်မာရာဇ၀င် သိအပ်ဖွယ်ရာ အဖြာဖြာ စာအုပ်စာမျက်နှာ (၁၂၂)တွင် (၃) ရာစုလောက် ကစပြီး ဟိန္ဒူဘာသာ ရခိုင်ပြည် သို့ရောက်လာသည်။ ၈ရာစုတွင်မူကား အစ္စလာမ်ဘာသာ ရောက်ရှိ လာပြီး များ စွာသော ရခိုင်တို့သည် မွတ်စလင် ဘာသာဝင် များဖြစ် လာကြ သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ရခိုင်ဘုရင် မင်း များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသော်လည်း သူတို့၏ ဘွဲ့များမှာ မူကား မွတ်စ လင် ဘွဲ့များဖြစ်သည်။ ဥပမာ-“ဘစောဖြူ” မင်းကို “ကလီမားရှား” ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ “မင်းခ မောင်း” ကို“ဟူစိန်ရှား” ဟူ၍ လည်းကောင်း မွတ်စလင်ဘွဲ့ များဖြင့် ခေါ်ဆိုကြသည်။ မြန်မာ့ဆို ရှယ် လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ပါတီစည်းရုံးရေး ဗဟိုကော်မတီ ဌာန ချုပ်မှ ထုတ်ဝေသော “အခြေပြု မြန် မာနိုင်ငံ ရေး သမိုင်း” စာမျက်နှာ(၃၈၇) “မင်းစောမွန်” (ခေါ်) နရမိတ်လှ(ခေါ်) စူလေမာန်ရှား ၏ နောက် ဆက် ခံသော မင်းဆက် များမှာ အောက် ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
အမှတ်စဉ် (၁) မင်းခရီ/နရနု (နရမိတ်လှ၏ ညီတော် “စူလေမာန်ရှား” ကိုဆက်ခံသူ (အေဒီ ၁၄၃၄-၁၄၅၉) (အလီခန်) မှ ရခိုင် ဘုရင်အမှတ်စဉ် (၁၆)ကြိမ်ဖြစ်သော သီရိသုဓမ္မရာဇာ (အေဒီ ၁၆၂၂- ၁၆၃၈) (ဆောလင် မ် ရှား)စသည့် မင်းအဆက်ဆက် တို့သည် ယင်းတို့ နှင့် ယှဉ်တွဲဖော်ပြ ထားသည့် အတိုင်း မူဆ လင် ဘွဲ့အ မည်များကို ခံယူထားသော်လည်း ရခိုင်မင်းများ သာ ဖြစ်ကြသည်။
မိမိတို့ ပိုင်နက်အတွင်း အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ၏ တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေး ကိုပေး ၍ သိမ်းသွင်း စည်းရုံး ထားနိုင်စေရန် မဂို ဧကရာဇ်နှင့် နားလည်မှု ယူထားပြီး ဘွဲ့မည်ခံ ယူ ထား ကြောင်း ပြသ ရန်ဖြစ်ပေ သည်ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့မှာ ရခိုင်ပြည်သား စစ်စစ်ဖြစ်၍ ၎င်းတို့ သည် ပြည်ထောင်စု ကြီးအတွက် မြန်မာ လူမျိုးဖြစ် သည်။ ပြည်ထောင် စုကြီး၏ မိသားစုအရင်း အချာ ဖြစ် သည် ဟု ခံယူပါ သည်။ ပြည်ထောင်စု သားအားလုံး၏ မေတ္တာကို ရယူရေးသာ ရိုဟင်ဂျာ တို့၏ ပန်း တိုင်ဖြစ် ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မဟာမေဒင်ဘာသာဝင်များကို ရိုဟင်ဂျာဟု သော်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသားဟုသော် လည်းကောင်း သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အကြီး အကဲနှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ တစ်ခြားသော အဖွဲ့အစည်းများအား (လေး နက် စွာ)လေး နက်စွာ တင်ပြ တောင်းဆိုအပ်ပါ သည်။
မှတ်ချက်။ ။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ချဉ်းကပ်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်လည်း ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားများမှ လိုလားနေပါသည်။
áƒá†áá‹ – Burmese invasion of Arakan and the rise of non Benga…
áƒá…á†á‹ – Arakan rule in Chittagong (1550–1666 A.D) « danyawadi
áƒá„á†á‹ – Bengal – Arakan Relations: A Study in Historical Per…
The Rohingya « danyawadi
၁၃၀။ – Bandarban District
၁၂၉။ -မြောက်ဦးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ မင်းဆက်များ
၁၂၃။ – ROHINGYA AND BENGALI – (ရိုဟင်ဂျာနှင့်ဘင်္ဂါလီ)
၃၆။ – ရခိုင်ပြည် ( ARAKAN ) ၏နောက်နောက်ခံသမိုင်း
၃၄။ – ရခိုင်ပြည်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ၊ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ (The etymolog…
၃၀။ – ရခိုင်ပြည်ရှိ,ရိုဟင်ဂျာသမိုင်း , History , Burmese invasion o…
၂၇။ – ရခိုင်ပြည်ရှိ ၊ ရိုဟင်ဂျာများအကြောင်း ,( ROEWENGYAS IN ARAKAN…
၂၆။ – ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းမမှန်မကန်ပြောသော Media ကို Media နှင့်တုန့်ြ…
၂၃။ – ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း – By Dr. Swapna Bhattacharya (Chakraborti)
၂၂ ။ – “ပြည်ထောင်စုသား အချင်းချင်းလက်တွဲစေလို” – စောလွင် (ရန်ကုန်တက…
၁၄။ – ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းအသေးစိတ်: Myth and Reality
၁၃။ – ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း (ဦးနုရ်ကမာလ်)
၁၂။ – Muslims in Manipur
၁၀။ – ရိုဟင်ရျာသမိုင်း (ရေး – Dr. Habib Siddiqui )
၉။ – တိုင်းရင်းသားရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစု
၇။ – ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းအကျဉ်း(ရေး – ဦးဘသာ)
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၉)
By danyawadi February 22, 2013
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတရားဝင်ရပ်တည်မှု နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ (၁) ၁၉၅၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့ ည ၈ နာရီအချိန် – နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီး ချုပ်ဦးနု ၏ အသံ လွှင့်မိန့်ခွန်း တွင်မောင်တောနှင့်ဘူးသီး တောင်မြို့နယ်များတွင်နေထိုင် လျက် ရှိသောပြည်ထောင်စု သား များ သည်များသောအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာအမျိုး သားဖြစ်ကြ သည် ပြောကြား ခဲ့သည်။ (၂) နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဗဆွေမှ ၁၉၅၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၃) ရက်နှင့် (၄) ရက်နေ့များတွင် ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်းတောမြို့ လူထုအစည်း အဝေး များတွင် ရိုဟင်ဂျာများ သည် ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ချင်းတိုင်းရင်း သား […]
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၈)
ရခိုင်ပြည်နိုင်ငံရေး သမိုင်းနှင့် အနာဂတ် ရခိုင်ပြည်(ရခိုင်ပြည် အမျိုးသား ပါတီ) Posted by arakanmuslim Relative articles ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၇) ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၆) ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၅) ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၄) ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၃) ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၂) ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၁)
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၇)
By danyawadi February 22, 2013 Leaveacomment
တစ်ချိန်ကရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့လူမျိုးဟာ (၁၄၃)မျိုးထဲတွင်ပါဝင်တဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ဘယ်သူလဲ ဘာလဲ ရေးသားသူ — အောင်တင် မြန်မာပြည်ရဲ့ နယ်စပ်တနံ တလျားမှာ နှစ်နိုင်ငံကိုခွပြီး နေထိုင်နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ရှိနေပါ တယ်။ မြို၊ ခမီး၊ လူချိုင်း၊ မရမာကြီး၊ ရခိုင်၊ ချင်း၊ နာဂ၊ မီဇို၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ၀၊ ပအို့၊ ပလောင်၊ လီ ဆူး၊ ပဒေါင်၊ ကရင် ၊ မွန်၊ စ သဖြင့် တိုင်းရင်းသားအသီး သီးသည် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာ နေထိုင်ကြသူများရှိသလို တ ဘက်နိုင် ငံတွေဖြစ် တဲ့ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယ၊ နီပေါ၊ တရုတ်၊ လာအို၊ ယိုး ဒ ယားနိုင် […]
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၆)
၁၁-ရာစု မတိုင်မီက အာရ်ကာန်(ရခိုင်)သမိုင်းအကျဉ်း အပိုင်း(၁) အစောပိုင်း ဟိန္ဒူလူမျိုး (သို့မဟုတ်) ဓညဝတီမင်းဆက် ရခိုင်ပြည်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် ဆက်စပ် နေသောကြောင့် ၄င်း၏ ခေတ်ဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မြို့ပြ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးများကို ခရစ်မပေါ်မီ ရာစုနှစ်များ မတိုင်မီကပင် ရရှိခဲ့ပြီး၊ ဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာနှင့် မြို့ပြ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်များ လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ (RC. မာဂျုမ်ဒါးရ်) …………………….. ဆက်လက်ပြီး ပိုမို လေ့လာလိုပါက ဤနေရာတွင် ကလိပ်လိုက်ပါ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ နယ်နမိတ် အတွင်းကျသည့် နယ်ပယ်ပိုင်နက်သို့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ရောက်ရှိ လာသော ပိုးမွှားအကောင်ပလောင်များ Enclave ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၄င်းဒေသသည် နိုင်ငံရပ်ခြား […]
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၅)
By danyawadi February 21, 2013
ဓမ္မဒိဌာန်ကျကျ တွေးကြည့် သင့်ကြပါ၏ ခေတ်ကြီးက အွန်လိုင်းခေတ်ဆိုတော့ တနေ့ တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်တော့ အီးမေးထဲ အလျှံပယ်ဝင် လာတဲ့ သတင်းတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ၊ ဆွေးနွေးချက်တွေ၊ ကြော်ငြာတွေထဲက စိတ်ဝင်စား စရာတွေ ကိုဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ရတဲ့အခါတော့လည်း စိတ်ဝင်စားတဲ့၊ တွေးမိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပေါ်မှာ စာကောက်ရေးဖြစ်၊ ဆွေး နွေး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း အများဒကာ ပြောနေကြလို့ ရခိုင်ပြည်တွင်းက လူမျိုးရေးကိစ္စ သိမိ ကြားမိ တွေးမိ တာလေး ရေးလိုက်ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျိုးစုများအရေး စဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာရခိုင်ပြည်တွင်းက ဘင်္ဂါလီလို့ ရခိုင်များကဆိုတဲ့ (ရိုဟင် ဂျာ) ဆိုသူတွေရဲ့ အရေးကလည်း ခြွင်းချန်ထားလို့ မရဘူးဆိုတာ ၁၉၉၀-၉၁ ခုနှစ်လောက်က မာနယ်ပလော မှာ ရခိုင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဗဟိုတရားရုံးရှေ့နေကြီး ခိုင်စောထွန်းနဲ့ လူမျိုးစုအရေး […]
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၄)
ရိုဟင်ဂျာသည် ဥပဒေကြောင်းအရတိုင်းရင်းသားရှိခဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသည်တိုင်းရင်းသား မြန်မာလူမျိုးစုတစ်စုဖြစ်ပါသည်။ အာဏာရှင်(မဆလ) အစိုးရနှင့် စစ် အစိုးရတို့က သမိုင်းကိုလျစ်လျှူရှုပြီး ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကိုငြင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာ သမိုင်းမှာလည်း ရိုဟင်ဂျာများအား တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတစ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်မှာ သမိုင်း အထောက် အထားအရခိုင် လုံနေသည်။်။ ၁၈၆၄ ခုနှစ် နိုင်ငံခြားသားအက်ဥပဒေအရ လည်းကောင်း၊ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေသော ရိုဟင်ဂျာ များ ကို (၁၉၄၇-၁၉၇၄ ) ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အရလည်းကောင်း ၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ သားဖြစ် တည်မှု့ ဥပဒေ နှင့်၁၉၈၂ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေများအရ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများသည် ၁၈၂၃ ခုနှစ်မတိုင်မီကပင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပင်မနိုင်ငံအဖြစ် အခြေချနေ ထိုင်ခဲ့သော လူမျိုးစုဖြစ်သည်ဟု […]
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၃)
(၁) ရခိုင်ပြည်သည် နှစ်ပေါင်း ထောင်ကျော် ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းဖြင့် သီးခြားလွတ်လပ်စွာ တင့်တင့်တယ်တယ် ရပ်တည်လာခဲ့သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်၏ တိုးတက်မှု၊ ဆုတ်ယုတ်မှုတို့မှာ ရခိုင်ပြည်သူတို့ အပေါ်သာ မူတည်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း ထောင်ကျော်သော ကာလအတွင်း ရခိုင်ပြည်၏ အဓိက လူမျိုးကြီး နှစ်ရပ်ဖြစ်သော ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့သည် မြို၊ သက်၊ ဒိုင်းနက်၊ ချင်း၊ ခမိ စသည့် လူမျိုးစုတို့နှင့်အတူ မရှိအတူ၊ ရှိအတူ၊ အေးအတူ၊ ပူအမျှ၊ တရေတည်းသောက်ကာ တလှေတည်းစီးပြီး တမြေတည်း၌ပင် နေထိုင်လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံ့ဦးဆောင် မင်းတို့သည် ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး၏ ခိုင်မာသော ညီညွတ်မှုကို စုစည်းနိုင်ခဲ့တိုင်း နိုင်ငံ၏အရှိန်အ၀ါ ထွန်းပြောင်နိုင်စေခဲ့ပြီး၊ ညီညွတ်မှု ဖြိုခွဲလေတိုင်း နိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ရည် […]
By danyawadi February 20, 2013
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး များ ဘင်္ဂလီမဟုတ် | စောလွင် ( ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) ရိုဟင်ဂျာများသည် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက် Arakan Region ယခုအခေါ် ရခိုင်ဒေသတွင်ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် နေထိုင်လာခဲ့သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု တစ်စုဖြစ်သည်ကို သမိုင်း အထောက်အထားများ အရ မည်သူမျှငြင်း ၍မရပါ။ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဦးသန်းစိန်အစိုးရမှ ရိုဟင်ဂျာသည် ဘင်္ဂလီလူမျိုးဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂလာဒေခ့်ျမှ ခိုးဝင်လာသူများ သို့တည်းမဟုတ် ကျူးကျော်လာသူများ သို့တည်းမဟုတ် စိမ့်ဝင်လာသူများ အစရှိ သဖြင့် ပြောဆိုနေ သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ နိုင်ငံတကာမှ ဖိအားပေးလာလျှင် မတတ်သာ၍ ရိုဟင်ဂျာများ ပြောရမည့်အစား ရိုဟင်ဂျာ နှင့်တွဲ၍ ဘင်္ဂလီကို အသုံးပြုလာသည်ကို တွေ့ရပြန် သည်။ ဤသို့ အသုံးပြုလာရခြင်းမှာ ရိုးသားစွာပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပဲ ကောက်ကျစ်၍ ပြောဆိုနေကြာင်း အဓိပ္ပါယ် ဆောင်နေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် […]
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၁)
By danyawadi February 19, 2013
မနက်ဖြန်(၂၀-၂-၂၀၁၃)နေ့တွင် လွှတ်တော် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရှိပါသလား ဟု မေးခွန်းထုတ်ရန်ရှိကြောင်း၊ သို့အတွက် ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း ဂဃဏန မသိရှိသူတွေ ရိုဟင်ဂျာ အသေးစိတ်ဖြေကြားနိုင်မည် မ ဟုတ် ပေ။ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းကို လွတ်တော်မှာမေးရမည့်မေးခွန်မဟုတ်။ သမိုင်းဌာနကို မေးမြန်းရမည်ရ မည့်မေးခွန်းဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာအထောက်အထားများ၊ အချက်အလက် အမြောက် အများ ရှိရာ အချို့ ကိုဖတ်ရှုလေ့လာ နိုင်(လင့်) များကိုတင်ပြပေးပါ သည်။၎င်းလင့်များကို အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ပါ။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ ၀န်ကြီးဦးနု လက်အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊အသံလွင့်ရုံမှာ အသံလွင်ခြင်းစွယ်စုံကျမ်း အတွဲ(၉) မှာ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း ဖေါ်ပြထားခြင်းမေယုခရိုင်မှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကိုသီးခြား ရိုဟင်ဂျာ နေထိုင်ဒေသအဖြစ်မေယုဒေသကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊ဗဟိုအစိုးရက တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ခြင်း— စသော အထောက်အထားမြောက်များစွာရှိကြောင်းအသိလိုပါသည်။ ဘင်္ဂလားမှ မွတ်စလင်ဘုရင်များ ရခိုင်ပြည်ထီးနန်းကို အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခဲ့ သည့် သမိုင်းအထောက်အထားများ ရှိပါသည်။ သမိုင်းကိုမေ့ဖျောက်ပစ်၍ မရနိုင်ပါ။မွတ်စလင်မ်တို့က ဘာသာတရား၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု၊ ရိုးသားမှု၊ လွတ်လပ်သော […]
One comment on “ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း (၁) မှ (၁၀)”
snowwhite January 11, 2014 at 7:04 pm	Reply
Dr. Ko Ko Gyi to Mya Aye (ဒေါက်တာ ကိုကိုကြီးမှ ဝေလေလေ မြအေးသို့) ...
GTC ကျောင်းက ဗီဒီယိုဖိုင်
Burmese to English Dictionary (Unicode)
တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် မြေပုံများ - State & Region UTM Map
ရနျကုနျမှာ လူဦးရေ သိနျးနဲ့ခြီ ဆန်ဒပွနေ
Movement of Muslims for Independance of Myanmar: မြန်မာမူစလင်တို့၏ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုသမိုင်း
A History of Chittagon Vol. (1)
A History of Chittagong Vol. (1)
ICJ ကွားဖွတျ စီရငျခကျြနဲ့ ပတျသကျ ပွီး မွနျမာ အစိုးရ ဝဖေနျခံနရေ
ICJ ကို မြန်မာဘက်က ဒုတိယအစီရင်ခံစာ တင်သွင်း
မြန်မာ COVID စမ်းသပ် ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ ကုလကူညီ
ရိုးသားစှာယှဉျပွိုငျကွ [ရေးသူ – သရဝဏျ (ပွညျ)
ICJ တှငျ ဂမျဘီယာ၏ သကျသေ အထောကျအထား မြားနှငျ့ အစီရငျခံစာ တငျသှငျးမှု မွနျမာ အတှကျ အခွအေနေ မကောငျးနိုငျဟုဆို
ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ၊ ဖစျေ့ဘုတျနဲ့ ဂမျဘီယာ ရဲ့ လူမြိုးတုံး သတျဖွတျမှု လြှောကျလဲခကျြ အပျေါ ဘီဘီစီ နဲ့ အှနျလိုငျး က ဆကျသှယျ မေးမွနျးမှု
ဒိုငျးနကျလူမြိုးမြားတိုးတကျရေး ပါတီ ဥက်ကဌ ဦးအောငျကြျောဇော ရှေးကောကျပှဲ အငျတာဗြူး
ဖကျြသိမျးခံရတဲ့ နှငျးဆီပါတီဝငျတှေ ပွညျခိုငျဖွိုးနဲ့ ပူးပေါငျးမညျ
UEC ဟာ သီးခွား လှတျလပျတဲ့ အဖှဲ့ ဖွဈ၊ အစိုးရက အမိနျ့ပေးတာ မရှိဘူး လို့ သမ်မတရုံးပွော
ရှေးကောကျတှငျ မဲပေးနိုငျရေး ကိစ်စ
English Burmese Picture Dictionary
UN SECRETARY-GENERAL APPOINTS MR. ABUBACARR MARIE TAMBADOU AS REGISTRAR OF THE MECHANISM
Dawda Jallow is new Minister of Justice as Tambadou takes up UN Job
ဝနျကွီးခြုပျဦးနု၏ အမရေိကနျပွညျထောငျစု ခရီးစဥျ
လူမြိုးဘာသာမရှေး လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ လောငျး ဖွဈခှငျ့ ရှိဖို့ တိုကျတှနျး
ကျောက်တော်နဲ့ မင်းပြားဘက် ကျေးရွာတွေက ဒေသခံအများအပြား နေရပ်စွန့်ထွက်ပြေးနေ
အစိုးရနဲ့ AA တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရေး အလားအလာ အားရစရာမရှိ
အိုငျစီဂအြေမှုအတှကျ ငှတေောငျးခံမှုအပျေါ တပျကိုယျစားလှယျ မေးခှနျးထုတျ
ICJ မြန်မာအစီရင်ခံစာအပေါ် ဂမ်ဘီယာ တရားရေး ၀န်ကြီးအမြင်
ICJ ဆုံးဖြတ်ချက်အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ မြန်မာဘက်က ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အပေါ် ဝေဖန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်
1943 The British Military Administration of North Arakan
ဂူတာပွငျကြေးရှာသတျဖွတျမှု စဈခုံရုံးမှာစုံစမျး စဈဆေးပွီးပွီလို့ဆို
မွပေုံနဲ့ ပုဏ်ဏားကြှနျး ရှာ နှဈရှာက လူငယျတှနေဲ့ လူလတျပိုငျးတှကေို တပျမတျောဖမျးဆီး
အပူဒဏျ အန်တရာယျ သတိထားဖို့ ကနျြးမာရေးဌာန သတိပေး
အတညျပွုလူနာတခြို့ကို ကူးစကျမှုရာဇဝငျ ရှာမတှေ့
မြန်မာသံအမတ်သစ်အဖြစ် Thomas L. Vajda ကို အဆိုပြု
လျှပ်စစ်နဲ့ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက အိမ်သုံးမီတာခ ၇၅ ယူနစ် အထိ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမည်
Inhumane to turn away Rohingya refugees, says Dr Mahathir
တိုင်းရင်းဒေသ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ကော်မတီဖွဲ့
ရခိုင်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်တွင်း ဥပဒေမဲ့ ကျူးလွန်မှုတွေကို စုံစမ်းပေးရေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကချင်ကွန်ဂရက် တောင်းဆို
ကိုရိုနာဗိုငျးရဈကာကှယျရေး ညှနျကွားခကျြ မလိုကျနာသူတှကေို အရေးယူမညျ
Coronavirus: China rejects call for probe into origins of disease
ဗြိတိန်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးကို လူနဲ့စတင် စမ်းသပ်
မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ထိုင်းနိုင်ငံ COVID-19 အမိန့် လိုက်နာဖို့ တိုက်တွန်း
Canada Prime Ministeramessage on Ramdan (23-4-2020)
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန် သေပြီဆိုတဲ့ သတင်း မှန်ကန်မှု မရှိ
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ အခွခေံပညာစာမေးပှဲ အောငျစာရငျး အသငျ့မဖွဈသေး
Categories Select Category ကျန်းမာရေး (533) ခရစ်ယာန်ဘာသာ (10) စာပေအက္ခရာ (5) ထူးဆန်းထွေလာ (125) နည်းပညာ (91) ဖတ်စရာကဏ္ဍ (5) ဗဟုသုကဏ္ဍ (24) ဗုဒ္ဓဘာသာ (78) မျက်မှောက်ရေးရာ (4) မှတ်စု (1,360) သတင်းများ (12,477) သမိုင်း (477) သုတစာပေကဏ္ဍ (64) အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍ (58) သူ့အကြောင်း (363) အင်တာဗျူး(286) အစ္စလာမ်ဘာသာ (349) အထူးကဏ္ဍ (2,081) အိတ်ဖွင့်စာ (22) အထောက်ထားများ (192) အထွေထွေ (39) အခြားကဏ္ဍ (2) အခြားဘာသာ (7) ဥပဒေ (218) ဆောင်းပါးများ (4,571) ပေါ်လစီ (881) ရွေးကောက်ပွဲ (167) မြန်မာ – English (9) မြန်မာစကားပုံ (7) Burmese Version (1) Census (166) Contact (6) Dictionary (15) English Dictionary (8) Other Dictionary (3) Discovery (109) Election (3) English – မြန်မာ (11) English – Rohingya (3) English Version (1,733) Articles (772) Documents (112) History (301) Arakan History (228) Burmese History (60) M-M History (46) Scripts (5) World History (48) Interview (23) Laws (14) News (1,061) Breaking News (283) Local News (294) Open Letter (12) Other News (10) World News (648) Religious (43) Islamic (41) Other Religious (2) English-Myanmar, Pali-Myanmar (1) General (278) Introduction (5) Link (260) Movie (197) Other Dictionary (6) Photos (759) Popular Post (5) Rohingya – English (10) Special (5) Videos (429) Website (43)
Archives ယခင် ပိုစ်များဖတ်ရန် Select Month February 2021 (1) January 2021 (3) December 2020 (2) November 2020 (3) October 2020 (7) July 2020 (4) June 2020 (6) May 2020 (12) April 2020 (35) March 2020 (54) February 2020 (72) January 2020 (69) December 2019 (143) November 2019 (131) October 2019 (51) September 2019 (2) July 2019 (3) May 2019 (4) April 2019 (7) March 2019 (4) February 2019 (31) January 2019 (24) December 2018 (9) November 2018 (19) October 2018 (27) September 2018 (51) August 2018 (37) July 2018 (82) June 2018 (86) May 2018 (102) April 2018 (69) March 2018 (78) February 2018 (100) January 2018 (85) December 2017 (116) November 2017 (118) October 2017 (98) September 2017 (118) August 2017 (117) July 2017 (80) June 2017 (14) May 2017 (8) April 2017 (16) March 2017 (11) February 2017 (11) January 2017 (20) December 2016 (50) November 2016 (23) October 2016 (23) September 2016 (15) August 2016 (33) July 2016 (40) June 2016 (41) May 2016 (52) April 2016 (113) March 2016 (96) February 2016 (99) January 2016 (178) December 2015 (140) November 2015 (201) October 2015 (88) September 2015 (93) August 2015 (140) July 2015 (91) June 2015 (93) May 2015 (143) April 2015 (150) March 2015 (150) February 2015 (105) January 2015 (155) December 2014 (289) November 2014 (175) October 2014 (195) September 2014 (166) August 2014 (189) July 2014 (266) June 2014 (184) May 2014 (314) April 2014 (256) March 2014 (242) February 2014 (218) January 2014 (340) December 2013 (258) November 2013 (231) October 2013 (232) September 2013 (234) August 2013 (387) July 2013 (359) June 2013 (533) May 2013 (672) April 2013 (701) March 2013 (717) February 2013 (626) January 2013 (861) December 2012 (712) November 2012 (665) October 2012 (719) September 2012 (449) August 2012 (553) July 2012 (434) June 2012 (541) May 2012 (423) April 2012 (360) March 2012 (87) February 2012 (89) January 2012 (26) December 2011 (83) November 2011 (37) October 2011 (1)